Kuyabonakala ukuba linento yokwenza ne Islam | Apg29
Mail Reader ngu Stefan Eliasson
Ngale ndlela obagwebelayo zizenzo ngayo. Louisa kunye Maren Akubona, kutshanje wafumana emangcwabeni nge-34 AmaKristu anqunyulwe Libya.
Kutheni kufuneka ukuba sifunde ngakumbi Islam? Inzala mncane kodwa izizathu ezininzi zokuba abantu abasweleyo jikelele ukuphucula ulwazi lwabo.
Yobungakanani sesinye isizathu, Islam unqulo yesibini ngobukhulu imbali emva ubuKristu. Malunga nama-billion 1.6 ebantwini, ngaphezu isihlanu abemi behlabathi ukuba amaSilamsi, kukho inani liyaqhubeka ukwandisa, kungekhona ngenxa yokuba abantu ngokwabo bakhethe ukukholelwa ukuba ilanga zonke iiseti rhatya umthombo zinodaka (Qur'an 18:84), kodwa ngenxa yokungazi, ugrogriso isigwebo sentambo kwabo bafuna ukuhamba, amazinga ukuzalwa aphezulu kunye nemfuduko.
Inani ngabazalwane Sweden kunye namanye amazwe aseYurophu sele liqhuma kwiminyaka yakutshanje kunye nabantu abaninzi kangaka abasingqongileyo ukwabelana imvelaphi enye, kubalulekile ukwazi ukuba yintoni abamele.
Bengazi into ethile yeKoran kunye hadith athi enkulu nkqu ngaphakathi Islam. Uninzi Ayekholelwa ukuba Islam nguye inyaniso engenakuphikwa kuphela, ngoko ke oko baye baxelelwa bonke ubomi babo. Kwangaxeshanye, bafunda ukuba ukuthandabuza imithombo Muslim.
AmaSilamsi aguqukileyo ku Islam ukwenzile oku ukusukela kwiimeko ezininzi akukanikwa ulwazi lobuxoki. Abantu waguquka emva kokuba befunde iZibhalo zinqabile kakhulu.
"Kubafaneleyo mntu othembekileyo okanye ibhinqa elithembekileyo, xa Allah kunye isithunywa sakhe isigqibo enye into, ukuba ukuzikhethela kulo mba; ke lowo ungamviyo Allah kunye uMpostile bakhe, usentolongweni manifest impazamo." (Qur'an 33 : 36)
"Umpostile bukaThixo nina ngoku wafumana umzekelo omhle kulowo mntu uthemba ku Allah noSuku ophelileyo, kwaye rhoqo kubhena uThixo." (Qur'an 33:21)
Ulwazi zamaKristu kubaluleke kakhulu xa Islam sigqwethe imixholo yeBhayibhile. Xa sisabelana iVangeli abemi bethu Muslim, kufuneka sazi njani ukuba nombono isigidimi adlulisele. AmaKristu lavumela umzekelo ukuba uYesu unguye uNyana kaThixo. Kuba Muslim, oku kuthetha ukuba uThixo umele ukuba waba ngesondo umfazi wazala unyana, ngoko loo nto kanye oko kufundiswa iKoran.
"Ngokuqinisekileyo izulu nomhlaba ukuba njani abantwana, ngoko ke akukho ngumfazi?" (Quran 6: 101)
Kunjalo kaBathathu Emnye. Akukho umKristu uye kwimbali nokuba wakholwa okanye yathi yin'we zaziquka kaThixo, uYesu noMariya. Le mfundiso zonakaliswa iKurani ezifundisa amaSilamsi ukuba oku koko sikholwa.
"Nokuba xa uThixo wathi, uYesu, unyana kaMariya, ngaba wathi ebantwini:" Thabatha mna nomama wam oothixo endaweni uThixo! (Koran 5: 116) ""
ngoyena ndoqo ukholo lwamaKristu 'kukaYesu ekufeni, ukuvuka, nobuThixo bakhe. Islam uphika kuphela yonke le nto, kodwa ke ezi mfundiso, sidla ukuba uzikhusele xa amaSilamsi baqeqeshelwa ukuba ahlasele ezi.
"Kwaye bathi, ngokuqinisekileyo uKristu Yesu, unyana kaMariya, isithunywa sikaThixo abulawe, kodwa bababulele okanye emnqamlezweni naye, kodwa kwabonakala kubo kuphela, kunye nabo bathi ngayo, ukuba okunene bezingazinzanga, ngokuba bengamazanga akukho ulwazi ngaye, kodwa nokucingela kuphela ukuba ukuthobela; zange ambulale ebomini, kodwa uThixo wamvusa, ngokuba uThixo unamandla kunye usisilumko. (Koran 4: 156) "
Apho ukungazi omkhulu
Kumazwe apho ngokungazi lexikulu, apho Islam iphila kakuhle. Sweden ngumzekelo ogqwesileyo oku. Ukungazi jikelele yenza eendaba, abezopolitiko kunye nabashumayeli Muslim unokuthi nantoni kunye abantu abakholelwa kuzo.
Imizekelo yalo amaxesha ezingenakubalwa siyeva kumntu imaam emva kwenye abagrogrisi ezibulalayo egameni Allah ukuhlasela akunanto yakwenza Islam. Sisoloko sisiva ukuba, umzekelo, Muhammad umlweli ilungelo labasetyhini njengoko kwi West ngokuphathelene nenkululeko yabafazi. Ezi ubuxoki, kodwa abantu abakholelwa kuyo.
abafana ababini ndamnqamla intloko
Sinako Louisa Vester lokucheba Jespersen kunye Maren Ueland umzekelo, abafazi ababini abaselula ngenkohlakalo wamnqumla eholideyini e Morocco. Umntu kumsitho yesikhumbuzo zisithi zokubulala akukho mfuneko yakwenza Islam kunye karhulumente SVT na umbane uyakhawuleza engena kuyo. Oku konke kwaye kuphela ukuba wenze Islam.
Qaphela ukuba ukubulawa umzamo, nto leyo uthi eninzi. I waxelela abahlobo bam ukuba wayeza kufika phezu abakhenkethi ezimbini, waphathwa ukubulawa halal kubo, ihlumelo yonke nasemva kwimidiya loluntu ukuba Wayeqiniseka ukuba nam itshixiwe up. Yintoni ufaneleke amaxwebhu ababulali? Ngenxa yokuba Koran kunye hadiths!
"Umvuzo wabo, leyo balwe uThixo uMpostile wakhe, kwaye baqhatha ububi emhlabeni, uya nje ukuba baye kubulawa okanye emnqamlezweni, okanye izandla zabo neenyawo naxa crosswise, okanye ukuba baza bagxothwa kweli lizwe. Oku uya ihlazo labo kule bomi, yaye buza kubakho alindelwe isohlwayo ezoyikekayo. "(Quran 5:37)
Yintoni abakhenkethi ezimbini yokwenza ityala ngokungacacanga 'ukulwa uThixo uMpostile wakhe, kwaye baqhatha ububi emhlabeni "? Louisa and Marens ezingababulali wafungayo ekumthobeleni Ingabe. Zombini Norway Denmark bayinxalenye mdibaniso ehlabathini igalelo ngeendlela ezahlukahlukeneyo ukuze silwe IS. Louisa kunye Maren ngemali umlo nxamnye naye ngokuhlawula irhafu yaye netyala licala ngasentla.
Ngokutsho Muhammad ngokwakhe ukuze samkele ukuba inkxaso kwaye kuxhotyiswe amajoni imali efanayo njengoko amajoni ngokwabo. Oku unobangela Allah kangangoko ukuba.
"Lowo eliqeqesha a ekungxoleni unobangela Allah, uya kufumana umvuzo kwakhe, ngaphandle ukuba ziphazamisa umvuzo kwi legorha kokuqala." (Sunan Ibn Majah 2758)
ingcwaba Mass 34 ndamnqamla amaKristu
Siyazi ukuba Islam nguye uMtyholi kwi kumzekeliso Association intloko. UYesu kukuliphi kwaye iCawe umzimba kwaye kuyacaca ukuba uSathana ufuna ukwahlula phakathi kwabo.
Ilindele ukubuya kukaYesu, Stefan Eliasson